iFixit mamaky ny iPhone 13 Pro amin'ny tsy ampoizina | Vaovao IPhone
iFixit manaparitaka ny iPhone 13 Pro amin'ny tsy ampoizina
Toy ny isan-taona, iFixit dia mitondra antsika ny "fanapotehana" manokana amin'ny fitaovana hitondra antsika antsipiriany feno momba ny hoe iPhone 13 Pro ao anatiny sy ireo singa ao anatiny amin'ity taona ity. Tamin'ity taona ity, afaka nahita fahagagana tao amin'ireo singa ao amin'ny Face ID izy ireo ary nanasongadina ny vaovao mety hisy fiatraikany amin'ny fiovan'ny efijery amin'ilay fitaovana.
Alohan'ny hamotopotorana izay ao anatin'ny iPhone vaovao, iFixit dia nanao scan X-ray ahafahantsika mandinika ny bateria miendrika L, ny peratra magnet'ny MagSafe, ary koa andriamby Image Stabilizing eo akaikin'ny faribolana misy ny fitaovana. Ny iray amin'ireo zava-nisongadina dia ny iPhone 13 Pro toa manana tariby avy amin'ny iray amin'ireo sensor eo an-tampony izay, raha ny filazan'ny iFixit, dia mety hiteraka olana rehefa manamboatra fitaovana.
Raha manohy amin'ny sarintany an-tsary isika, ny Taptic Engine miorina ao anatiny sy miandraikitra ny fifehezana ny Haptic Touch, toa kely kokoa noho ny taona maro. Na izany aza, lehibe kokoa noho ny tamin'ny taona lasa izy ary nampitombo ny lanjany tamin'ny 4,8 grama izay nilanja ny iPhone 12 Pro ka hatramin'ny 6,3 izay milanja ankehitriny. Mitohy amin'ny fampitahana amin'ny iPhone 12 Pro, ny maodely Pro vaovao dia manafoana ny sofina mpandahateny miorina amin'ny efijery amin'ny famindrana azy eo anelanelan'ny fakan-tsary eo aloha ny modely Face ID, a fepetra izay hanamorana ny fanoloana ny efijery. Miahiahy ny iFixit fa Apple dia mampiasa tontonana OLED voaaro miaraka izay manambatra ny kasika sy ny sosona OLED amin'ny fampisehoana, mampihena ny vidiny, ny hateviny ary ny isan'ny tariby hitantanana ao anatin'ilay fitaovana.
Ny lesoka amin'ny famolavolana vaovao an'ny fitaovana dia ny mpampahafantatra ny fidiran-drano sy ny projecteur spot an'ny iPhone 13, izay natambatra ho maodely tokana ary dia namela an'i Apple hampihena ny haben'ny notch amin'ny iPhones amin'ity taona ity. Miaraka amin'izany, nataon'izy ireo tsy miankina amin'ny efijery ihany koa ny fitaovan'ny Face ID.
Raha ny filazan'ny iFixit, na eo aza ny tsy fiovan'ny maodelin'ny Face ID sy ny efijery, ny soloina efijery rehetra dia mampandeha ny Face ID. Midika izany fa ny fanoloana efijery tsy nahazo alalana avy amin'i Apple dia hamela ny fitaovantsika tsy hanana fahaizana mamoha amin'ny Face ID. (mamoha na manamarina ny hetsika rehetra misy ny fanekena ny tarehy).
Mikasika ny fahaizan'ny bateria, ny iPhone 13 Pro dia mampiasa 11,97Wh, izay mitovy amin'ny 3.095mAh, raha oharina amin'ny 2.815mAh ho an'ny iPhone 12 Pro. Ny bateria ao amin'ny iPhone 13 Pro dia manana endrika endrika miendrika L amin'ity taona ity, fanovana avy amin'ny bateria mahitsizoro nampiasaina tamin'ny maodely Pro tamin'ny taon-dasa. Nilaza iFixit fa nahomby ny fanandramana fifanakalozana bateria, na eo aza ny tsaho fa tsy ho azo atao ny manolo bateria.
Ao anatiny misy 6 GB RAM, Miaraka amina puce ultra-wideband sy fitantanana herinaratra namboarin'i Apple, ary tsy ampoizina fa ny iPhone 13 Pro dia manana modem an'i Qualcomm's SDX60M ary izay iFixit dia mino fa transceiver 5G. Ilay mpandalina malaza, Ming-Chi Kuo, dia nilaza izany Ny chip modem an'i Qualcomm ao amin'ny iPhones amin'ity taona ity dia manana fampiasa amin'ny fifandraisana satelita, fa raha misy izy dia tsy nahatsikaritra iFixit ary tsy nandefa fifandraisana momba izany i Apple ao amin'ny Keynote, noho izany toa lasa tsy nisy dikany io fampiasa io. Bloomberg dia nanazava fa Apple dia miasa amin'ny sehatra zanabolana izay ahafahan'ny olona mandefa lahatsoratra amin'ny toe-javatra vonjy maika amin'ny alàlan'ny fifandraisana satelita, saingy io asa io dia tsy andrasana raha tsy amin'ny 2022.
Raha liana te hijery ny fianjeran'i iFixit amin'ny antsipiriany bebe kokoa ianao, avelanay eto ianao ny rohy mba hahafahanao mandinika azy io ary mahita ireo faritra rehetra izay manome ny haitao Apple vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » iFixit manaparitaka ny iPhone 13 Pro amin'ny tsy ampoizina
Apple dia mandefa ny iOS 15.1 Beta 2 sy ny sisa Betas ho an'ny fitaovany rehetra
Ny fiakarana miafina amin'ny vidin'ny Beats Flex